Canonical inoda kuunganidza data kubva kune vashandisi veUbuntu kuti vavandudze kuburitsa kwavo Linux Vakapindwa muropa
Luis Lopez | | Kugoverwa, Noticias
Canonical CEO Will Cooke nhasi yazivisa kuti kambani iri kutsvaga shandisa mashandiro ekutora data mune ramangwana kuburitswa Ubuntu, izvi ndezvekuvandudza zvinhu zvinonyanya kukosha kune vashandisi.
Ruzivo Ubuntu mainjiniya vanofanirwa kugadzirisa zvimwe zvinhu zveiyi sisitimu zvinosanganisira mushandisi maseru, akaisirwa software, Ubuntu vhezheni uye nharaunda, maratidziro enetiweki, CPU mhando, RAM, dhisiki saizi, resolution yechidzitiro, data kadhi revhidhiyo uye kunyangwe iwo mamaboard ekugadzira.
Kuwedzera, kambani inoda kuziva nzvimbo yakoKunyangwe iwe uchivimbisa kusachengeta chero IP kero, yako yekumisikidza nguva, yekuisa marongero, uye ekutanga ekuisa zvaunofarira zvichaunganidzwa zvakare.
Sarudzo yekutora dhata ichaitwa muUbuntu installer
Canonical inotaura kuti kune hurongwa hwekushandisa sarudzo yekuunganidza data kubva kune inoisa ine chikamu chinotaura chakadai "tumira kuongororwa kunatsiridza Ubuntu"Uye ichave inogoneswa nekutadza.
Kune vagadziri veUbuntu, zvakakosha kuti uzive kuti kuchengetedza iyi sarudzo kunogoneswa kunovabatsira kutarisisa kuedza kwavo pazvinhu zvinonyanya kukosha kune ramangwana shanduro dzesisitimu.
Yese data yakagovaniswa ichaendeswa zvakachengeteka pamusoro peHTTPS inobatwa neCanonical. Iyo data icha chengetwa munharaunda uye pane inotevera restart inozotumirwa kana anoshanda network ikaonekwa, pamusoro pezvo, vashandisi vanozokwanisa kuwana iyi faira nekuiongorora, uye mhedzisiro mhedzisiro yeunganidzwa wese ichave yeruzhinji.
Pakupedzisira, iyo kambani ichagadzirisa ayo zvakavanzika marongeroShanduko idzi dzinozoratidzwa mune inotevera vhezheni yesisitimu, Ubuntu 18.04 (Bionic Beaver) iyo inosvika musi waApril 26 wegore rino.
Kana iwe uchida kuziva rese data iro iro muchina rinotora kana iwe uchida kusiya yako maonero, iwe unogona kuzviita mune iyo chinyorwa chepamutemo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » Canonical inoda kuunganidza Ubuntu mushandisi data kuti ivandudze kuburitswa kwayo
Kuti uwane izvo zvinoshandiswa nevashandisi, nzira kwayo ndeyekuvabvunza mune imwe ongororo. Nenzira iyoyo mushandisi anoziva data raanopa. Imwe yacho kururamisa kwekusora.
Zvinotaridza kuti Big Brother ndiro bhizimusi hombe riripo. Asi zvakare ndeyekunyepedzera nekuti manyepo mazhinji anotenderera paInternet kupfuura ruzivo rwakakomba.